Khabiirka Cilmiga ah ee Ka Hortagidda Makiinada Raadinta ee laga soo xigtay Indexing WordPress
Ujeedada bilaabidda barta dad badan ayaa ah in la helo gaadiidka inta badan ee suurtogalka ah. Qaar ka mid ah, waxay u egtahay in riyo runtu ay run tahay haddii Google uu muujinayo waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Sidaa darteed, ayaa nooga jawaaba su'aasha ah: Sababta qofku u jeclaan lahaa inuusan goobta ku dhejin karin mashiinka raadinta ?
Ross Barber, oo ah takhasus sare oo ka mid ah Semaat , ayaa halkan ku qeexaya sababaha looga hortagayo makiinadaha raadinta ee laga soocayo boggaaga internetka iyo siyaabaha lagu sameeynayo - мебель сомово, мебель черноземья.
Markaad bilawdo, iyo blogku wali waa mid cusub, waxaa jira fursad weyn oo aad ka shaqeyneyso goobta oo aad ka daabacan karto meesha. Horey u socoshada, waxaad ogaan kartaa in mawduuca aad dhigan tahay mid aan fiicnayn oo uusan jeclayn dadka kale inay saameeyn xun ku yeelato. Xalka keliya ee aad ka fekereyso waa inaad ka saartid bogga inaad ka soo baxdo natiijooyinka raadinta Google ilaa aad ka heshay xirfadahaaga blogging, oo hadda diyaar u ah dadka si ay u galaan goobtaada. Kuwa soo socdaa waa habab yar oo ku saabsan sida loo sameeyo tan:
Tallaabo 1. Dhiibo Makiinada Raadinta ee Indexing WordPress
Fikradda ka dambeysa tani waa in laga hortago makiinadaha raadinta ah ee ka imanaya goobidda meesha ugu horeysa. Waxaa jira laba hab oo qofku u isticmaali karo:
Habka 1: Waxaa jira muuqaal is-dhexgal ah oo ku yaala WordPress oo ka hortagaya makiinadaha raadinta ka imaanaya isku-socodka goobta
Furfur qaybta maamulka ee WordPress oo dooro "Akhriska" meeleeynta goobaha. In "muuqaalka search engine," waxaa jira sanduuqa hubinta kaas oo macmiil u ah in "Isticmaalaan makiinadaha raadinta ka soo caansiinta goobta." Marka aad saxdo sanduuqa, guji keydinta iyo ka bax.
Habka 2aad: Haddii aad doorbidayso hab kale oo buug gacmeed, waxaad ku dhejin kartaa robots.txt waa door wanaagsan oo adiga kugu habboon..
Raadi robots.txt faylasha faylasha oo aad ka heli karto maamulaha faylka. Isticmaal ereyga (Wakiil-User: *, Press Enter, iyo Disallow: /), si aad u ilaaliso matoorada raadinta ka soo deg degga goobta.
Tallaabada 2. Badbaadinta Aqoonsiga
Raadinta mashiinka iyo kalluumeysatadu ma heli karaan feylaal lagu ilaaliyo feylasha goobta. Isticmaal hababkan soo socda si aad u sameyso furaha ereyada:
Habka 1aad: Adeegyada adeega waxay leeyihiin muuqaal sir ah oo loo yaqaan 'passwords' kaas oo aad u fudud in la isticmaalo. Rugaha iyo cPanel waxay leeyihiin habab aad u fiican.
Marka la joogo guddiga kantaroolka gacanta, raadso astaanta leh ikhtiyaarka si loo ilaaliyo buugga. Marka aad riixdid badhanka, daaqad cusub ayaa u muuqata liiska faylasha, kaas oo aad dooratid "public_html." Riix badhanka "badhanka", oo bixi.
Habka 2aad: Waxaad isticmaali kartaa plugin WordPress ah sida WordFence, ama Password-ka ilaaliya si loo gaaro natiijooyin isku mid ah. Iska hubi in ay tahay ilaa hadda taariikhda ka hor inta aan la rakibin. Ka dib markii la rakibay, samee furaha ereyga, iyo wax waliba waxay ku sugnaan doonaan nabadgelyo.
Tallaabada 3. Ka-saarista Bogga Indexed ee Google
Waxaa jira waqtiyo ay Google muujinayso goobta oo ka soo horjeeda rabitaanka milkiilaha. Waxaa jira hab lagu baddalayo tan, laakiin waxay ubaahantahay sameynta cinwaanka Google Search Console ee ugu horeeya. Ka dib markaad go'aansato bogga internetka ee aad rabto inaad iska saarto, madax ka noqo "Ka saar URLs" ee hoosta "Google Index" tab. Sanduuq madhan oo la bixiyay, geli cinwaanka bogga oo guji sii wad. Xulo si ku meel gaar ah u qarin boggaaga adigoo gurguurta kadibna soo gudbi codsiga.
Muhiim maaha sababaha aad uga hortageyso makiinadaha raadinta ee ka imanaya gurguuridda iyo muujinta macluumaadka boggaaga. Talaabooyinka la bixiyay ayaa kaa caawin doona sidii aad u gaari lahayd taas. Qaarkood ma bixin karaan natiijooyinka ugu wanaagsan laakiin u adeega ujeedada loo jeediyay.